पवित्र आत्मा को उपहार :? प्रकाश, शक्ति, प्रेरणा 
पवित्र आत्माको वरदान
तिनीहरू के हुन् भनेर जान्न पवित्र आत्माको वरदान प्रेरित पावलले कोरिन्थीहरूलाई लेखेको पत्रलाई पवित्र धर्मशास्त्रमा खोज्नुपर्दछ। त्यहाँ, विशेष गरी अध्याय १२ मा, पद 12 देखि १० सम्म प्रत्येक उपहार निर्दिष्ट गरिएको छ।
ती वरदानहरू हामीले पाएका उपहार हुन्, पवित्र आत्माको वरदानको सम्बन्धमा, हामी विशेष उपहारहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौं जुन हामीलाई चर्चको कुनै पनि अभिव्यक्तिको वरदानसहितको मण्डलीलाई आशिष्‌ दिने एकमात्र उद्देश्यको साथ दिइएको छ।
उपहार विश्वासद्वारा प्राप्त हुँदैन तर बुबाले आफ्ना जनहरूको आवश्यकता र स्वभाव देख्नुहुने बित्तिकै प्रदान गरिन्छ। यी उपहारहरूलाई तिनीहरूको गुण र प्रकृति अनुसार तीन समूहमा वर्गीकृत गरिएको छ।
1 पवित्र आत्माको वरदानको वर्गीकरण
1.1 पवित्र आत्माका वरदानहरू: प्रकाशका वरदानहरू
1.2 पवित्र आत्माको वरदान: शक्तिको वरदान
1.3 पवित्र आत्माको वरदान: प्रेरणाको वरदान
पवित्र आत्माको वरदानको वर्गीकरण
पवित्र आत्माका वरदानहरू: प्रकाशका वरदानहरू
यी वरदानहरू मानवीय ज्ञानमा केही घटनाहरू ल्याउँदछन् जुन उद्देश्यहरू, योजनाहरू वा परमेश्वरको इच्छाको रूपमा लुकेका छन्। यी उपहारहरू हुन्:
यो यस्तो उपहार हो जुन विशेष अभिव्यक्तिहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। यस पीटरको स्पष्ट उदाहरण हामी येशू आफैंमा देख्छौं जब उनले पत्रुसलाई भन्छन् कि गाउने मुर्गाभन्दा पहिले उसले यसलाई तीन पटक इन्कार गर्नेछ। (मत्ती २:26::34)
प्रकाशको यो शब्द सपना, दर्शन, भविष्यवाणी वा उही आवाजको माध्यमबाट आउन सक्छ भगवान.
यो विशेष उपहार, जब प्रकट हुन्छ, भविष्यका घटनाहरू प्रकट गर्दैन तर भूत वा वर्तमानमा जुन तन्त्रमन्त्रमा पाइन्छ।
En सुसमाचारको अध्याय सेन्ट जोनका अनुसार सामरी स्त्रीको कथा देख्न सकिन्छ, जसमा येशूले उनलाई बताउनुहुन्छ कि उनका पाँचजना पति थिए र अहिले उनी उनका पति छैनन्, यो यो उपहारको अभिव्यक्तिको स्पष्ट उदाहरण हो।
आत्मा विवेकको वरदान
यो पूर्णतया आत्मिक वरदान हो जुन आफैलाई ख्रीष्टको चर्चको उत्थानको लागि प्रकट गर्दछ। यो उपहार संग तपाईं बुझ्न सक्नुहुनेछ जुन आत्मा हो जुन केहि व्यक्तिमा निश्चित क्षणमा कार्यरत छ।
प्रेरित पावल हामीलाई यस वरदानको स्पष्ट अभिव्यक्ति देखाउँदछन् जब उनले एलिमामा चलाइएको आत्मालाई बुझ्न सके, त्यो खण्ड अध्याय १ verses पद and र १० मा प्रेरितहरूको प्रेरितको पुस्तकमा पाइन्छ।
पवित्र आत्माको वरदान: शक्तिको वरदान
एक प्रकारको अलौकिक उपहार जसले विश्वासको विश्वास बढाउन र परमेश्वरको शक्तिमा विश्वास नगर्नेहरूलाई विश्वास दिलाउन प्रकट गर्दछ।
चमत्कार बनाउने उपहार
यो सब भन्दा अचम्मको उपहार हो किनकि जब यो प्रकट हुन्छ यो अलौकिक चमत्कारको माध्यमबाट गरिन्छ, जुन चीजहरू, मानव बोलेर असम्भव छन्।
परमेश्वरको वचनमा हामी येशूको पहिलो आश्चर्यकर्म देख्छौं जसले पानीलाई दाखमद्यमा परिणत गर्नु थियो, जुन कुरा कसैले पनि गर्न सक्दैन, उसले यो गर्यो र त्यहाँ भएका सबैलाई चकित पार्यो। (यूहन्ना २:)) यो येशूको सबैभन्दा लोकप्रिय चमत्कार हो।
यो पवित्र आत्माको द्वारा दिइएको विश्वास हो जुन मानिसमा भएको स्वाभाविक विश्वास होइन तर धेरै अगाडि जान्छ। यो त्यस्तो विश्वास हो जसले मानिसलाई असम्भवमा, अलौकिक र परमेश्वरबाट सीधै आएको कुरामा विश्वास गर्न अग्रसर गर्दछ।
परमेश्वरको वचनमा उसले हामीलाई एक मानिसको बारेमा बताउँदछ जो भन्छ कि ऊ सामर्थ्य र अनुग्रहले भरिपूर्ण छ, अर्थात् विश्वासको वरदान उहाँमा प्रकट भएको थियो, यो मानिस स्तिफनस हो र उनको कथा प्रेरितको कार्य पुस्तकमा लेखिएको छ। प्रेरित मा पद from देखि प्रेरित। पछि।
स्वास्थ्य को उपहार
यो वरदान प्रायः मानव शरीरमा देखा पर्दछ र केवल जब त्यहाँ विशेष उपचारमा ईश्वरीय उद्देश्य हुन्छ। यस उपहारमा बहुवचन प्रयोग गरिएको छ किनभने उपचारका धेरै उपहारहरू छन् अन्यमा जस्तो एउटा मात्र होइन। अर्को शब्दमा, एक व्यक्तिले उपचारको केही उपहारको अभिव्यक्ति हुन सक्छ, त्यसैले यसले सबै रोगहरू निको पार्छ तर आफैलाई प्रकट गर्दैन।
चार सुसमाचारका पुस्तक र प्रेरितको प्रेरितको पुस्तकको अंशहरू अद्भुत छन् जसले आश्चर्यजनक उपचारका आश्चर्यकर्महरूका कथाहरू भन्छन्।
पवित्र आत्माको वरदान: प्रेरणाको वरदान
यी वरदानहरू चर्चको स्थापनाको लागि प्रकट भएको थियो। तिनीहरू उपहार हुन् जसले धेरै ध्यान आकर्षित गर्दछन् र उनीहरूको मौलिकता र शक्तिले तिनीहरू प्रकट हुँदा आश्चर्यचकित हुन्छन्।
यो एउटा वरदान हो जुन धेरै सताइन्छ किनकि यो उही मुखको रूपमा विश्वासीहरू मार्फत बोल्दैछ।
यो पूर्ण रूपमा भिन्न हो किनकि यो भविष्यसूचक सेवाको साथ भ्रमित गर्नु हुँदैन। यो उपहार सल्लाह दिन, सम्पादन गर्न, सान्त्वना दिन, सिकाउन, र विश्वस्त गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो यस्तो उपहार हो जुन जिम्मेवारी र सुव्यवस्थाका साथ प्रयोग गर्नुपर्दछ किनकि यसले परमेश्वरको नाममा बोल्दै छ।
अन्य भाषाहरूमा बोल्नु पवित्र आत्माको अभिव्यक्ति हो, तर जब यो हुन्छ, भाषाको एक मात्र विधा बोल्दछ।
जब एक भन्दा बढि लि spoken्ग बोलेको हुन्छ, यो किनभने यो उपहार प्रकट भएको छ। अन्य भाषाहरूका प्रकारहरू ईश्वरीय उद्देश्यको साथ प्रकट हुन्छन् किनकि हामी प्रेरितहरूको प्रेरितको पुस्तकको अध्याय २ मा १२ देखि १२ सम्मका पदहरूमा देख्छौं।
जब यो वरदान प्रकट हुन्छ तब विश्वासीको शरीर प्रयोग गर्नुहोस् तर सबै चीज केवल ख्रीष्टको दिमागले प्रभुत्व जमाउँछ।
यो उपहार, अन्तिम जस्तो छ, अनुग्रहको प्रबन्ध सुरु हुँदा देख्न थाल्छ, जुन हामी अहिले पनि बाँचिरहेका छौं। यो वरदान पवित्र आत्माले चर्चको नियन्त्रणमा लिदा बोल्न सकिने विभिन्न भाषाहरूलाई अर्थ दिनको लागि प्रकट भएको छ।
प्रेरित पावल कोरिन्थीहरूलाई अर्काे ठाउँमा भेटिने बित्तिकै ठूलो स्वरमा अन्य भाषाहरूमा बोल्न सल्लाह दिन्छन्, तर त्यसोभए उनीहरूले मण्डलीहरूको व्यवस्थालाई कायम राख्नुको उद्देश्यका साथ यो कुरा शान्तपूर्वक गर्नुपर्दछ र हामी यो सन्देश बुझ्न सक्छौं कि ईश्वरको सन्देश ऊ चर्चलाई दिन चाहन्छ।
पवित्र आत्माको वरदान ईश्वरीय उद्देश्यका लागि दिइन्छ र क्रममा प्रकट हुनै पर्छ ताकि उनीहरूले कुनै उद्देश्य बिना कुनै उद्देश्य पूरा गर्न सक्दछन्।
एक विश्वासीले उपहारलाई आफूले विचार गरेको समयमा नै प्रकट गर्न सक्दछ, किनकि उसले अझै पनि उपहार बग्न दिनको लागि स्वतन्त्र इच्छा राख्दछ वा हुँदैन।
यस लेख पनि पढ्नुहोस् उडन्ता छोरा y परमेश्वरको हतियार.
बौद्ध धर्म - यस धर्मलाई विस्तृत रूपमा जान्नुहोस्